FTTH မှန်ဘီလူးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China FTTH Optical Receiver စက်ရုံ
ZHR1000SD FTTH အဆင့်မြင့် Optical Receiver
1 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ZHR1000SD FTTH optical လက်ခံသည် CATV FTTH ကွန်ယက်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်သည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ AGC optical အဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်မှု၊ သေးငယ်သော Volume နှင့်မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြစ်သည်။ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအခွံကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ optical control AGC circuit တွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အပြင်ဘက် modular power supply သည်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် debugging ကိုအဆင်ပြေစေသည်။ ၎င်းသည် FTTH CATV ကွန်ယက်တည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ၂။ ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင် ၁။ GaAs module ကို RF ampli ...
1.Operation bandwidth: 45 ~ 1000MHz; 2.when input ကို optical ပါဝါ -1dBm ဖြစ်ပါတယ်: analog signal ကို: အ output ကို optical ပါဝါ67dBμV (OMI = 4%) ဖြစ်၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် signal: output output optical 61dBμV, MER> 38dB (EQ OFF); ၃။ input power optical -10dBm ဖြစ်လျှင် Digital signal: output output optical 43dBμV, MER> 30dB (EQ OFF); က input ကို optical ပါဝါပြောင်းလဲနေသောအကွာအဝေး -10 ~ 0dBm ဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုသည်။ 4. ဒီကုန်ပစ္စည်းမှာ F-type RF output port တစ်ခု၊ မက်ထရစ်သို့မဟုတ် Imperial တစ်ခု ...
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ZHR10P series CATV converter ဒီဂျစ်တယ်တီဗီ၊ အိမ်သို့ fiber သို့။ ဤစက်သည်မြင့်မားသော sensitivity optical လက်ခံသည့်ပြွန်ကိုလက်ခံသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေး၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောလျှောက်လွှာပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဖိုင်ကွန်ယက်သို့ဖိုင်ဘာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံစံရွေးချယ်မှု ၅ မျိုးရှိပါသည်။ ထူးခြားချက်များ Operation bandwidth: 45-1000MHz; (1) input ကို optical ပါဝါဖြစ်တဲ့အခါ - 1dBm: ① Analog signal ကို: output ကို optical ပါဝါ 68dBuV (OMI = 4%) ဖြစ်၏ ②တူးပါ
၁။ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ZHR10B စီးရီးဒီဂျစ်တယ်ရုပ်မြင်သံကြားစက်၊ အိမ်သို့ fiber သို့ပြောင်းခြင်း။ ငါသည်သူ၏စက်သည် power supply မရှိဘဲ power သုံးစွဲမှုမရှိဘဲမြင့်မားသော sensitivity optical လက်ခံသည့်ပြွန်ကိုလက်ခံသည်။ Pin = -1dBm, Vo = 68dBuV input input optical output level သည်စီးပွားရေးကွန်ယက်သုံးခုကိုပေါင်းစပ်။ ပင်မကွန်ယက်အက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ZHR10B ကြွေ၏ပုံသဏ္appearanceာန်, ရွေးချယ်လုပ်ရွေးချယ်မှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ၂။ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ ၁) စွမ်းအားမလိုအပ်ပါ။ ၂) လုပ်ငန်းခွင် bandwidth ...
WDM နှင့်အတူ FTTH mini ကို Optical Receiver
ဖော်ပြချက် ZHR1000PD သည် FDTP / FTTH ဂီယာ application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော WDM တွင်သေးငယ်သောအတွင်းပိုင်း optical လက်ခံစက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြိမ်နှုန်းနှင့်ပုံပျက်တုံ့ပြန်မှုများကိုဆူညံသံနည်းခြင်း၊ မြင့်မားသော RF output နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်းတို့ဖြင့်ရရှိစေသည်။ ၎င်းသည် single mode fiber-pig tailed ဖြစ်ပြီး connector အမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ Interface No မျက်နှာပြင်ဖော်ပြချက် 1 RF OUT RF OUT1 F connector2RF OUT2 optional3PWR ပါဝါ adapter port4PON 1490 / 1310mn data interface SC / PC ...
ZHR1000P စီးရီး FTTH optical receiver သည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သော FTTH ကွန်ယက်ဖြေရှင်းချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး၊ လက်ခံနိူင်သည့် optical power နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။ ZHR1000PD အထူးသဖြင့် FTTP / FTTH လျှောက်လွှာအတွက်ဒီဇိုင်း။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ လက်ခံနိူင်သည့် optical power နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းသည် MSO အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ WDM သည် 1550nm ဗီဒီယို signal နှင့် 1490nm / 1310nm data signal အတွက်ဖိုင်တွဲတစ်ခုတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ONT device ကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက် Reflection 1490nm / 1310nm ။ သူတို့ဟာအရမ်းကိုတော်ပါတယ်
Outline ZHR1000MF Mini Optical node သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမှုကောင်းသော၊ အသံအနိမ့်ပမာဏသေးငယ်။ Fiber To The Node / Fiber To Home (FTTH) ကွန်ယက်အတွက်ကောင်းမွန်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ• Band filter ဖြင့် 1550nm သာသွားနိုင်သည်။ •ကြိမ်နှုန်း 40MHz -1002MHz ။ ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းဖြင့်အသုံးပြုသောဂယ်လီယမ်အာရင်နိုက်ကိုချဲ့စက်။ •မက်ထရစ်စနစ် (သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်စနစ်) ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း output port နှင့် DC12V ~ 15V လွတ်လပ်သော DC power supply ဆိပ်ကမ်းရှိသည်။ •အသေးစားအလူမီနီယမ်သွန်းလောင်းသည့်အဖုံး, အလှအပ ...
Parameters Optic Feature CATV အလုပ်လှိုင်းအလျား nm 1260 ~ 1620 1540 ~ 1563 Pass wavelength nm 1310 နှင့် 1490 Channel Isolation dB ≥40 1550nm & 1490nm တာ ၀ န် ၀ တ္တရား A / W ≥0.85 1310nm ပါဝါလက်ခံခြင်း dBm ≥0.9 1550nm & 1490nm +2~ -10 Analog TV Optical return loss dB +2~ -20 ဒီဂျစ်တယ်တီဗီ (MER＞ 29dB) ≥55 Optical fiber connector SC / APC LC / APC RF Feature Work Bandwidth MHz 47-1002 ...
Outline ZHR1000M Mini Optical node သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမှုကောင်းသော၊ အသံအနိမ့်ပမာဏသေးငယ်။ Fiber To The Node / Fiber To Home (FTTH) ကွန်ယက်အတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ထူးခြားချက်များ• Frequancy 40MHz -1002MHz ။ ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းဖြင့်အသုံးပြုသောဂယ်လီယမ်အာရင်နိုက်ကိုချဲ့စက်။ •မက်ထရစ်စနစ် (သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်စနစ်) ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း output port နှင့် DC12V ~ 15V လွတ်လပ်သော DC power supply ဆိပ်ကမ်းရှိသည်။ •သေးငယ်သောအလူမီနီယမ်သွန်းလောင်းသည့်အဖုံး၊ လှပသောပုံသဏ္,ာန်၊ အိမ်သုံးအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ • SC / ... ကိုသုံးပါ။
အိမ်တွင်း FTTH ကွန်ယက်သို့လျှောက်လွှာဖိုင်ဘာ။ Fiber ကိုအိမ်သုံးကွန်ယက်သို့ဖိုင်ဘာအသုံးပြုခြင်း။ အစိုင်အခဲသေ - သွန်းလူမီနီယံအိမ်ရာ။ F အမျိုးသမီး connector နှင့်အတူ input ကို connector ကို SC / APC နှင့် RF output ကို။ 2- အဆင့် LED input ကိုပါဝါညွှန်ပြချက်နှင့်အတူ။ input ပါဝါအကွာအဝေး -10 ~ + 3dBm Output အဆင့် 75 ~ 80dBuV ။ Build-in AGC function ကို။ low-amplifier ကို push-pull နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အလွန်နိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု ＜2.0W ။ Parameters စွမ်းဆောင်ရည်ယူနစ်အညွှန်းကိန်း Optical parameter စစ်ဆင်ရေးလှိုင်းအလျား nm 1550 Input power dBm ...
FTTH Optical Receiver တည်ဆောက်ထားသော WDM ZHR860MD
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ZHR860MD သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပြီးမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရသော optical receiver ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ circuit ကို -10 ~ -3dBm အဖြစ်ကျယ်ပြန့်ပြောင်းလဲနေသောအကွာအဝေးအတွင်းရှိ optical power input ကို၏ RF output ကိုအဆင့်၏အော်တိုထိန်းချုပ်မှု (AGC) function ကိုသဘောပေါက်, ကျယ်ပြန့်ပြောင်းလဲနေသောအကွာအဝေး၏ optical detectors အမွေးစားခဲ့သည်။ ထူးခြားချက်များ Operation bandwidth သည် 47 ~ 1000MHz ဖြစ်သည်။ တစ်လမ်းအနိမ့်ဆူညံသံ RF signal ကို output ကို, ဒါဟာချွေတာနှင့်လက်တွေ့ကျသည်။ ၎င်းတွင် power supply နှင့် optical power အတွက်ညွှန်းကိန်းများရှိသည်။ optical အော်တိုအမြတ်ထိန်းချုပ်မှု (AGC) function ကို။ PO နှင့်အတူ ...
၁. ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ZHR100L Mini Optical Node သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမှုကောင်းသော၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီးအသံအနိမ့်အမြင့်၊ Fiber To The Node / Fiber To Home (FTTH) ကွန်ယက်အတွက်ကောင်းမွန်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်အညွှန်းကိန်းများဖြင့်အသုံးပြုသောဂယ်လီယမ်အာရီနီယမ်အသံချဲ့စက် (၂) အသွင်အပြင် ၁) ၁၃၁၀nm နှင့် ၁၅၅၀ စင်တီမီတာရွေးချယ်နိုင်သောအလုပ် ၀ င်းဒိုး ၂။ ကြိမ်နှုန်း 40MHz -1002MHz ။ ၄) မက်ထရစ်စနစ် (သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်စနစ်) ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းထုတ်ပေးသည့် port နှင့် DC12V ~ 15V လွတ်လပ်သော DC power supply ဆိပ်ကမ်းရှိသည်။ 5) သေးငယ်တဲ့လူမီနီယံသွန်းသွန်းက c ...